မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန်များ ငှားရန် | ShweProperty.com
ငှားရန် - ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း အမှတ်(76B)…
No(76B) မြတောင်ဝန်ကြီးဦးမှိုလမ်း စက်မှုဇုန်(၁) ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။ ယုဇနဦးယျာဉ်မြို့တော် အမှတ်(၂) သံလျင်တံတားအနီး။…...
No(76B) မြတောင်ဝန်ကြီးဦးမှိုလမ်း စက်မှုဇုန်(၁) ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်။ ယုဇနဦးယျာဉ်မြို့တော် အမှတ်(၂) သံလျင်တံတားအနီး။…
Daw Aye Aye Lwin
Advertiser : Daw Aye Aye Lwin
Property ID: S-1181367
Asking Price : 120 သိန်း
Office no : 943070267
ငှားရန် - အမှတ်(93)၊သံလွင်လမ်း၊ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးဘေး၊ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်
လှိုင်သာယာ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Listed 22 September 2018
Ko Kyaw Zaw Thant
ဖုန်းဆက်ရန်01, 242249, 01, 253549, 01, 01, 385775, 01, 253553
01, 242249, 01, 253549, 01, 01, 385775, 01, 253553
Advertiser : Ko Kyaw Zaw Thant
Property ID: S-1157845
Asking Price : 637 သိန်း
Office no : 01-242249/01-253549/01-01-385775/01-253553
ငှားရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုံတွင် ဂိုဒေါင်ငှားရန်…
ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုံ ၊2ဧက (20000)sqft ၁ ဂိုဒေါင် ၊ 315 KVA Tranformer...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုံ ၊2ဧက (20000)sqft ၁ ဂိုဒေါင် ၊ 315 KVA Tranformer
Advertiser : Royal Home
Property ID: S-1187280
Asking Price : 60 သိန်း
Mobile : 09260996994, 09402767111
Office no : 09257772775, 09257772776
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုန် ၊2ဧက (24000 sqft / 1 ဂိုဒေါင် ) (6000 sqft / 1ဂိုဒေါင်) ၊ 315KVA ...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်း စက်မှုဇုန် ၊2ဧက (24000 sqft / 1 ဂိုဒေါင် ) (6000 sqft / 1ဂိုဒေါင်) ၊ 315KVA
Property ID: S-1187353
ငှားရန် - ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံ(၁)ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်မြေကွက်(Malihku…
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံ(၁) ၊ မြေ၁ဧက ၊ ဂိုဒေါင် ၈၀x၅၀ (၁)လုံး ၊ ၁၀၀x၃၀ (၁)လုံး ၊ ၂၅x၅၀ ရုံးခန်း(၁)လုံး ၊ ပါဝါမီတာ ၊ 40 Lks မြေသီးသန့်…...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းစက်မှုဇုံ(၁) ၊ မြေ၁ဧက ၊ ဂိုဒေါင် ၈၀x၅၀ (၁)လုံး ၊ ၁၀၀x၃၀ (၁)လုံး ၊ ၂၅x၅၀ ရုံးခန်း(၁)လုံး ၊ ပါဝါမီတာ ၊ 40 Lks မြေသီးသန့်…
Listed 16 January 2019
Advertiser : Ai Tha
Property ID: S-1187297
Asking Price : 40 သိန်း
Mobile : 09264009696
Office no : 09264009898, 09264009797
ငှားရန် - တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 10 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 10 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Property ID: S-1187296
Asking Price : 10 သိန်း
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 15Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 15 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၄၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 15Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 2400 Sqft , Warehouse , 15 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Property ID: S-1187295
Asking Price : 15 သိန်း
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၈၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 20 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 20 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…...
တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုံ၂ ၊ ၈၀x၆၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ရေမီး ၊ 20 Lks Available Warehouse to rent in S.Dagon industrial Zone(Malihku Real estate) S.Dagon Industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 20 Lks Contacts us; 09-264009696 , 09-264009797…
Property ID: S-1187293
Asking Price : 20 သိန်း
ငှားရန် - သာကေတစက်မှုဇုံရှိငှားရန်ရှိသောဂိုဒေါင်(Malihku…
သာကေတစက်မှုဇုံ ၊ ၆၀x၈၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ပြင်ဆင်ပြီး ၊ 25 Lks Available Warehouse to rent in Thaketa industrial Zone(Malihku Real estate) Thaketa industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 25 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…...
သာကေတစက်မှုဇုံ ၊ ၆၀x၈၀ ၊ ဂိုဒေါင် ၊ ပြင်ဆင်ပြီး ၊ 25 Lks Available Warehouse to rent in Thaketa industrial Zone(Malihku Real estate) Thaketa industry Zone , 4800 Sqft , Warehouse , 25 Lks Contacts us; 09264009696 , 09-264009797…
Property ID: S-1187291
Asking Price : 25 သိန်း
ငှားရန် - လုပ်ငန်းစုံအတွက်သင့်တော်သည့်စက်ရုံ
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
မြေ ၂ဧက , 315KV...
မြေ ၂ဧက , 315KV
Listed 11 January 2019
Property ID: S-1186699
Asking Price : 111 သိန်း
ငှားရန် - အသေးစား လုပ်ငန်းရှင်များအတွက်…
Listed 10 January 2019
Property ID: S-1185842
ငှားရန် - ပစ္စည်းသိုလှောင်ရန်သင့်တော်သည့်…
Property ID: S-1185843
ငှားရန် - Code-7390 မရမ်းကုန်းမြို့နယ်တွင်…
Listed9January 2019
Property ID: S-1186410
Asking Price : 35 သိန်း
ငှားရန် - အင်းစိန်မြို့နယ်တွင် ပစ္စည်းများသိုလှောင်ရန်…
Address : No.(57/60), Lower Mingalardon Road, Danyingone, Insein Township, Yangon, Myanmar. Size : 12,000 sqm Facilities : 24 hours security, Forklift, Reach truck, Bulk Zone, loading/unloading container, trucking, Import/Export, International standard HSE. System : fire safety system, dock shelter…...
Address : No.(57/60), Lower Mingalardon Road, Danyingone, Insein Township, Yangon, Myanmar. Size : 12,000 sqm Facilities : 24 hours security, Forklift, Reach truck, Bulk Zone, loading/unloading container, trucking, Import/Export, International standard HSE. System : fire safety system, dock shelter…
Advertiser : ​အောင်​ပြည့်​ဖြိုး
Lower Mingalardon Road, Da Nyin Gone Ward
Property ID: S-1177239
Office no : 09 693487345, 09 250151314
ငှားရန် - ဇေကမ္ဘာဇုန်တွင် လုပ်ငန်းစုံ…
မင်္ဂလာဒုံ ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး
Listed 8 January 2019
Property ID: S-1183896
ငှားရန် - Warehouse Rent in Thaketa (ID-214)
7650 sqft warehouse for rent in Thaketa Township. Warehouse with 440 KVA transformer. Asking Price - 50 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in Thaketa (ID-214) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 သာကေတ…...
7650 sqft warehouse for rent in Thaketa Township. Warehouse with 440 KVA transformer. Asking Price - 50 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in Thaketa (ID-214) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language: 09792444317 သာကေတ…
Property ID: S-1171188
Asking Price : 50 သိန်း
Mobile : 09250349021, 09974401199
ငှားရန် - Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217)
61400 sqft , factory for rent in Hlaing Tharyar industrial zone. Factory in land area -2Acres. 315 KVA transformer is already included. Monthly rent price is - 200 Lakhs (Nego). Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…...
61400 sqft , factory for rent in Hlaing Tharyar industrial zone. Factory in land area -2Acres. 315 KVA transformer is already included. Monthly rent price is - 200 Lakhs (Nego). Factory Rent in Hlaing Tharyar (ID-217) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the…
Property ID: S-1172316
Asking Price : 200 သိန်း
ငှားရန် - Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216)
Warehouse for rent in Hlaing Tharyar Industrial Zone. Land Size - 3.8 Acres Warehouse Size - 201600 sqft Office Size -2stories, 26400 sqft Transformer - 400 KVA and 640 KVA Asking Price - 1 sqft 330 Kyats Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216) We can do negotiate on that Above mentioned price of…...
Warehouse for rent in Hlaing Tharyar Industrial Zone. Land Size - 3.8 Acres Warehouse Size - 201600 sqft Office Size -2stories, 26400 sqft Transformer - 400 KVA and 640 KVA Asking Price - 1 sqft 330 Kyats Warehouse Rent in Hlaing Tharyar (ID-216) We can do negotiate on that Above mentioned price of…
Property ID: S-1172295
Asking Price : 665 သိန်း
ငှားရန် - Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220)
3 Stories warehouse for rent in North Okkalapa. Warehouse size - 2280 sqft Warehouse has power meter. Asking Price - 45 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language:…...
3 Stories warehouse for rent in North Okkalapa. Warehouse size - 2280 sqft Warehouse has power meter. Asking Price - 45 Lakhs (Nego) Warehouse Rent in North Okkalapa (ID- 220) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English Language:…
Property ID: S-1172904
Asking Price : 45 သိန်း
ငှားရန် - Factory Rent in South Okkalapa (ID-222)
Factory rent in South Okkalapa Industrial Zone. Land size - 9425 sqft Warehouse Size - 7200 sqft Power line and lighting are already included. Factory Rent in South Okkalapa (ID-222) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English…...
Factory rent in South Okkalapa Industrial Zone. Land size - 9425 sqft Warehouse Size - 7200 sqft Power line and lighting are already included. Factory Rent in South Okkalapa (ID-222) We can do negotiate on that Above mentioned price of the property that is just the asking price of the owners. English…
Property ID: S-1173809
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန်စက်မှုဇုန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေ များ
အလုံ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဗဟန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဗိုလ်တထောင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကိုကိုးကျွန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်အနောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒလ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဒေါပုံ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
လှိုင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် လှိုင်သာယာ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် လှည်းကူး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မှော်ဘီ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ထန်းတပင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် အင်းစိန် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကမာရွတ် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကော့မှုး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ခရမ်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကွမ်းခြံကုန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကျောက်တံတား ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကျောက်တန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ကြည့်မြင်တိုင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် လမ်းမတော် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် လသာ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မရမ်းကုန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မင်္ဂလာဒုံ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မင်္ဂလာတောင်ညွှန့် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မြောက်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ပန်းပဲတန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ပုဇွန်တောင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် စမ်းချောင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဆိပ်ကြီးခနောင်တို ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဆိပ်ကမ်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ရွှေပြည်သာ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် တောင်ဥက္ကလာ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် တိုက်ကြီး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် တာမွေ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် သာကေတ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် သံလျင် ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် သင်္ဃန်းကျွန်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် သုံးခွ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် တွံတေး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ရန်ကင်း ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ရွှေပေါက်ကံ ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
မြန်မာပြည်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ကရင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ကယားပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မကွေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မွန်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ရှမ်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ချင်းပြည်နယ်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန် နေပြည်တော်ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် တိုက်ခန်းများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် မီနီကွန်ဒိုများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ကွန်ဒိုများရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် လုံးချင်းအိမ်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ၀န်ဆောင်မှု့ပါ တိုက်ခန်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ရုံးခန်း / ဆိုင်ခန်းများ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် ခြံ၊ မြေကွက်များရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ငှားရန် စက်မှုဇုန်